Ọdịiche dị na SEM na SEO nke ibe weebụ | ECommerce ozi ọma
Oge a anyị ga-ekwu ntakịrị banyere ọdịiche dị n'etiti SEM na SEO nke ibe weebụ, ebe ọ bụ na ndị a bụ okwu abụọ a na-ejikarị ma ọ bụrụ na ị na-etinye ya na Internetntanetị. Maka ndị na-ebido ebido, ibanye na ọchụchọ ọchụchọ (SEO), nwere ike ịkọwa dịka usoro nke usoro na usoro eji eme ihe iji hụ na peeji nke nwere ike ịnweta ihe nchọgharị ọchụchọ na iji meziwanye ohere nke saịtị ahụ site na injin ọchụchọ.
1 Gịnị bụ SEO?
2 Gịnị bụ SEM?
3 Ihe dị iche n'etiti SEM na SEO
Ebumnuche nke SEO Ọ na-enweta ọkwa dị elu na ibe nsonaazụ njin ọchụchọ, dịka ọmụmaatụ Google, Bing ma ọ bụ Yahoo. Ọ dị mkpa ka weebụsaịtị wepụta ọkwa na nsonaazụ ọchụchọ n'ihi na nke a nwere ike ịpụta ọtụtụ okporo ụzọ na-aga saịtị ahụ. Nke ahụ bụ, na saịtị dị elu na-ejikarị na engines ọchụchọ, ohere ka ukwuu nke onye ọrụ ga-eleta saịtị ahụ.
Gịnị bụ SEM?
N'aka nke ọzọ, SEM ma obu Ngini Ngini Ngini, bụ okwu sara mbara karịa SEO, ejiri ya gụnyere nhọrọ dị iche iche dịnụ iji were teknụzụ injinị nchọta, gụnyere mgbasa ozi akwụ ụgwọ. A na-ejikarị SEM kọwaa omume metụtara nyocha, ngosi, na nhazi nke weebụsaịtị na injin ọchụchọ. Ọ gụnyere akụkụ dịka njikarịcha njin ọchụchọ, ndepụta ndị akwụ ụgwọ na ọrụ ndị ọzọ lekwasịrị anya na ịba ụba na mgbasa ozi na weebụsaịtị.
Ihe dị iche n'etiti SEM na SEO
SEM bụ okwu sara mbara karịa SEO ebe ọ bụ na nke a na-achọ imeziwanye nsonaazụ ọchụchọ nke weebụsaịtị, ebe SEM na-eji engines ọchụchọ iji kpọsaa peeji ma ọ bụ azụmahịa a kwuru na ndị nwere ike ịntanetị, na-ezipụ okporo ụzọ ezubere iche na saịtị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEM » Ihe dị iche na SEM na SEO nke ibe weebụ